Feestooyinka Best In Europe Oo meesha aad ka heli | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Feestooyinka Best In Europe Oo meesha aad ka heli
Time si ay u helaan kuwa koofiyadaha xisbiga iyo u safanaya kooxda kabaha buuxiyey! Waxaan nahay ugu jirnaa ee Feestooyinka Best in Europe iyo meesha aad ka heli. aad diyaar u ah inay xafladayso aad dhex marayay tahay Summer? 🙋🏻
Feestooyinka ugu fiican Yurub: Creamfields, Daresbury, Boqortooyada Ingiriiska
Creamfields waa mid ka mid ah Feestooyinka Best in Europe iyo qoob ka ciyaarka ugu weyn UK ​​ee music Dabaaldag. Samee ugu of bangiga fasaxa ee August iyo ballansan tigidh xisbiga ahee!
Waxa ay marxaladaha ka go'an in ay hooy, EDM, technofest, durbaanka iyo Bass, riyooday, wasakh iyo ka badan, samaynta Creamfields tagaan-to iid taageerayaasha qoob music in Britain.
2019 ee Bandhigu wuxuu sano yimaado hawo ah oo gaar. Oo waxay noqon doonaan kuwa kaliya in ay marti supergroup ka qoob ka mid taariikhi ah Swedish House Mafia ee UK. Waxay sidoo kale waxa ay martigelin doontaa Deadmau5 iyo waxqabadka ugu horeeya ee Cirez D & Adam Beyer.
ku biir ah 70,000 dadka in dib ugu soo laabto Summer kasta ku marxaladaha cusub immersive, heerarka wax soo saarka Tacaddi, shows iftiinka iyo pyrotechnics.
Feestooyinka ugu fiican Yurub: Primavera Sound 2019. Barcelona, Spain
Waxaan jecel iidan for nooc kasta oo sababaha. Ka sokow fariimaha duugi ay aalladda on dhufto ee ay warbaahinta bulshada ka badan dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, wararka xanta ah ayaa la cilada ku saabsan waxa 'The Normal New’ dhignaan kartaa. Baadhid Primavera bogga facebook si aad u aragto waxa aynu uga jeednaa.
Waxa aan runtii, in kastoo jecel, waa in xafladda ayaa muujiyay ujeedada cad in samatabbixin on rahaamad warshadaha oo dhan si loo gaaro matalaad jinsiga siman on Safka. Waxay kor u bixiya waraaqaha la farxinno un-u badan nimanka. Laakiin laga yaabaa in ka sii muhiimsan, waa mid la qalmeen nool yihiin oo isku kala duwan ee falalka isu cadeeyay inuu yahay mid istaahila in la noqoshada badan ee muddooyinkii dhowaa, iyadoo aan loo eegin jinsiga, sifayn, ama jiilka.
Muhiimad forgoing dhaqanka hal ama laba headliners formula maalintii, qaabiyaasha ayaa buuxiyey sare ee biilka maalin kasta oo Xoolo ah oo talanti, oo ay ku jiraan kooxaha Erykah Badu, dhaqday Impala, Solange, Future, Cardi B, Interpol, Janelle Monáe, Robyn, at the, Christine iyo Queens ah, James Blake iyo Mac DeMarco.
Fiiri video haddii aad u baahan tahay wax kasta oo wax qancin!
Sziget waa Feestooyinka Best in Europe on Island iyo waxaa ka buuxsamay music, dhaqanka, jeclahay, iyo xoriyada! shaqada! Xaggee ayuu saxiixdo? Sug, kii hore ha ee aad ka hesho faahfaahin qaar ka mid ah.
waxaa Sziget Festival ugu horeysay ee dib u habeeyey 1993 sida yaryar isugu tan iyo waxaad fartaan Wannaagga mid ka mid ah ciidaha music ugu weyn Europe ayaa galay. Sannad kasta waxay ku dadaalaan in ay Szitizens qaar ka mid ah oo magac weyn ku soo bixinaa waxaa, iyo marti ka badan 1,000 waxay muujinaysaa guud ahaan 60 marxaladaha, waayo, 7 maalmood si toos ah. Rehydrate qof? 😝
Waxa aan jeclaan saabsan iidan iyo waxa iyaga oo dhigaya gooni noo?
The weight they put on art as well as music. There are multiple venues including a circus, tiyaatarka, museum quarter iyo si ka sii badan. Fanaaniinta iyo jilaayaasha ka yimid adduunka oo dhan si ay u soo bandhigaan hibadooda. Waxaa kaloo jira fursado Szitizens iyo fanaaniinta ay u wada shaqeeyaan si loo abuuro xusuus iyo macno leh farshaxanka.
Haddii aan qabow ku filan, waxay sidoo kale tahay bey'ada saaxiibtinimo! Waxay isku dayaan in ay u gudbiyo farriin ah in mar kasta oo ay awooddo oo Mahadin Eebehood wayna badn xafladda in ay noqdaan kuwo soo kobcaya, miyir.
Dareenka ku dhiiraday in uu raaco music iyada oo loo marayo Europe oo arka Feestooyinka Best in Europe? Markaas jartaan tikidhka tareenka a iyadoo la kaashanayo Save A tareenka !
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-festivals-europe/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Creamfields #Europemusicfestival #MusicFestival #Primavera #jasiirad europetravel Dabaaldag longtrainjourneys xisbiga trainjourney
Safarka tareenka, Tareenka Safarka Noorway, Tareenka Safarka Skotland, Tareenka Safarka Iswidhan, Tareenka Safarka Switzerland, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe